Somaliland: SOLJA Oo Si Adag Uga Hadlay Telefishanka HORYAAL Oo Ciidamo Boolis Ah La Wareegeen - Jigjiga Online
HomeSomalidaSomaliland: SOLJA Oo Si Adag Uga Hadlay Telefishanka HORYAAL Oo Ciidamo Boolis Ah La Wareegeen
Somaliland: SOLJA Oo Si Adag Uga Hadlay Telefishanka HORYAAL Oo Ciidamo Boolis Ah La Wareegeen
Hargeysa (JigjigaOnline) – Ururka Saxafiyiinta Somaliland ee SOLJA ayaa cambaareeyey xukuumadda Somaliland oo albaabada u laabtay telefishanka Horyaal ee xaruntiisu tahay magaalada Hargeysa.
Qoraal kasoo baxay SOLJA oo uu ku saxeeyahan yahay Guddoomiye Maxamuud Cabdi Jaamac (Xuuto) ayaa waxa lagu cambaareeyey qaabka ay xukuumaddu u martay xadhigga Telefishanka, kaas oo maanta ay ciidamo boolis ah la wareegeen.
Qoraalka SOLJA ayaa waxa uu u dhignaa sidan:
“Ururka Suxufiyiinta Somaliland isagoo ka duulaya Dastuurka Qaranka Somaliland, Xeerka Saxaafadda iyo Dastuurka SOLJA marnaba ma taageerayo wax kasta oo wax u dhimaya shareecada islaamka iyo Dhaqanka suuban ee reer Somaliland.
Ururka SOLJA, waxa uu si adag uga hawl-galay joojinta barnaamijkii telefishanka Horyaal sii daayay xayaysiiskii uu hordhaca uga dhigay, kaasoo ay bulshada reer Somaliland u aragtay mid xad-gudub ku ahaa Haweenka Somaliland.
Sidoo kale, ururka waxa uu maanulka Telefishanka ka dalbaday in uu raaligalin ka bixiyo barnaanijkaasi maadaama xeerka Saxaafadda Somaliland ku waajibinayo warbaahinta Somaliland wixii khalad ah ee ka dhaca inay ka garaabaan oo saxaan.
Ururka SOLJA, waxa kala shaqeeyay hay’addaha Qaranka ee dhacdadani khusayso sida Diinta iyo Aw-qaafta iyo Booliiskaba sidii loo soo af-jari lahaa arrintan ee cida ay khusayso looga xisaabtami lahaa.
Hase yeeshee, waxa aanu ururku SOLJA marnaba Aqbali karin in Hay’ad warbaahineed Xukuumaddu iska xidho iyadoon laga Garsoorin dhacdada lagu eedaynayo warbaahintaasi oo aanu xukun kama danbays ahi ka soo bixin.
SOLJA, waxay mar walba u maraysaa difaaca suxufiyiinta iyo hay’addaha warbaahinta nimaadka sharciga ah iyo talaabo kasta oo loo arko in lagu xalin karo gefka laga tirsanayo suxufiyiinta iyo hay’addaha warbaahinta.
Ururka SOLJA, waxa uu xukuumadda kula talinayaa in ay ka dheeraato talaabo kasta oo ay u qaado nidaam aan sharci ahayn, isla markaana ku fuliso awood aan waafaqsanayn sharciga dalka u yaala.
SOLJA, waxay hay’addaha warbaahinta iyo suxufiyiinta ka hawl gala ba ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan wax kasta oo wax u dhimaya sharafta, karaamada iyo wadajirka bulshada reer Somaliland, si aanay ugu mutaysan ciqaabta ka dhalan karta dhibaatada ay baahintoodu samayso
Muqdisho: Qaramada Midoobay Oo Ka Digtay QARAXYO Ka Dhici Kara 24-ka Saacadood Ee Soo Socda
Midowga Afrika oo go’aan kasoo saaray muranka badda ee Somaliya iyo Kenya